ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ပထမဆုံးထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံသည် Baselight | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ပထမဆုံးထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ Baselight ထည့်သွင်း
လန်ဒန် - 31 ဇူလိုင်လ 2019: ဆော်ဒီအာရေဗျ၏နိုင်ငံတော်၌ရုပ်ရှင်ရုံအပေါ်တစ်ဦး 35 နှစ်တားမြစ်ချက်များရုတ်သိမ်းအောက်ပါ Nebras ရုပ်ရှင် Riyadh အခြေစိုက်, ပထမဦးဆုံးအပြည့်အဝစက်ရုံထုတ်လုပ်မှုနဲ့ post ဝန်ဆောင်မှုကိုထူထောင်ခဲ့သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောပူဇော်သက္ကာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, ထို post ကိုအိမ်သူအိမ်သား FilmLight နေက Blackboard5control panel ကိုတပ်ဆင်ထားနောက်ဆုံးပေါ် v2 ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့တစ်ဦး Baselight TWO ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည် suite ကို, ပါဝင်သည်။
"Nebras ရုပ်ရှင်ကဲ့သို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအယူခံဝင်နှင့်အတူရုပ်ရှင်ကိုဖန်တီးရန် Arabic အဘိဓါန်ပုံပြင်များနှင့်ဒေသခံအကြောင်းအရာနှင့်အတူရုပ်ရှင်ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်, ဒါပေမယ့်လည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းနှင့်အတူလက်တွဲမယ့်, ပွင့်လန်းနိုင်သောနေရာအကြီးအစိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလေထုကဒီမှာရှိပါတယ်" Cian ပက်ထရစ်ကပြောပါတယ် McLysaght, Nebras ရုပ်ရှင်၏ Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး။ "ကျနော်တို့ကထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျ Post-ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်တစ်နေရာတည်းမှာဆိုင်ပါ။ "
နိုငျငံတျောအပေါငျးတို့သနိုင်ငံသားများတစ်ဦးအောင်မြင်စီးပွားရေးမှာသူတို့ရဲ့အိပ်မက်တွေဖြည့်ဆည်းနိုင်သည့်အတွက်တက်ကြွလူ့အဖွဲ့အစည်းဖန်တီးရန်၎င်း၏မျှော်မှန်းချက် 2030 အစီအစဉ်နှင့်အတူတိုးတက်မှု၏ခေတ်သစ်တစ်ခုထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်။ လူအမျိုးမျိုးတို့၏ပုံမှန်မဟုတ်သောအသက်အပိုင်းအခြားကိုဆိုလိုတာသောလူဦးရေရဲ့နီးပါး 60% 30 အောက်မှာဖြစ်တယ်, ဒါတစ်ခုကြီးမားအသစ်နှင့်ထိရသေးသောစျေးကွက်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွင်လည်းမရှိ။
ဒီလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့, Nebras ရုပ်ရှင် Baselight အပေါ်ပြီးသွားမှ VFX မှတဆင့်အယ်ဒီတာ့အာဘော်ကနေချောမွေ့စွာ Workflows အဘို့, ARRI Alexa ကင်မရာများနှင့်ရွေ့လျားမှုဖမ်းကင်မရာတူးစင်ကနေကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမီကွန်ယက် Post-ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံမှယနေ့ထိပ်တန်းအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သမျှကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ အဆိုပါ Post-ထုတ်လုပ်မှုစင်တာအစုံအကြား Workflows ၏နီးပါးချက်ချင်းဆိုသလိုဝေမျှခွင့်ပြုထားတဲ့ ContentAgent, သုံးပြီးတလျှောက်လုံးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဤသည်အယ်ဒီတာများနိမ့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုနှင့် Baselight အတွက်ပြီးအနုပညာရှင်ကို cut နှင့် VFX ကောက်နှင့် 4K / HDR အတွက်စီမံကိန်းကိုက်ညီရန်။
ပြီးပြည့်စုံသောအခြေခံအဆောက်အဦများစတင်ချိန် မှစ. စိတျထဲတှငျ HDR ကိုအတူတညျဆောကျခဲ့သညျ။ တော၌လွှတ်အလင်းပေးအသေးစိတ်ဆုံးရှုံးမပါဘဲ Baselight အတွက်ရူပတစ်ဦးကိုပစ်ခတ်သို့လတ္တီတည်ဆောက်ရန်နှင့်ဖန်တီးမွမ်းမံနိုင်စွမ်းအရေးပါတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပါပဲ။
"မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်း, ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတစ်ချိန်ကနှေးကွေးနေသေးတယ်ခဲ့ကြသည်ထားတဲ့ post ကိုထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတည်ရှိခဲ့ပါသည်ဒီမှာစက်မှုလုပ်ငန်းခုန်-ဖားသမျှသောဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်ကိုလုံးဝ tapeless non-linear ကမ္ဘာကြီးကိုဖန်တီးခွင့်ပြုခဲ့ရှိရာဥရောပနှင့်အမေရိကန်မတူဘဲ," McLysaght ကဆိုသည်။ အမှုအရာချက်ချင်းဖြစ်ပျက်သငျ့ကွောငျး - "ဒါကဒီမှာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နေရာအနှံ့ဖြစ်သည့်ရုတ်တရက်တစ်ခုမျှော်လင့်အား။
"Baselight ဒီဝယ်လိုအားသို့ကစား" ဟုသူကဆက်ပြောသည်။ "Baselight မြန်နှုန်းလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ရှိရာညာဘက်စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး, client များသည်ဖြစ်စဉ်များတစ်ခုချဉ်းကပ်ရ UI ကိုမှတဆင့်အရပျကိုယူပြီးတွေ့နိုင်ပါသည်။ Baselight နေ့ကတဦးတည်းအနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာသို့ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ "
Nebras ရုပ်ရှင်မှာအသုံးပြုသော Baselight v5 ၏နောက်ဆုံးပေါ်လွှတ်ပေးရန်, အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည် suite ကိုအတွင်းနှင့်တည်းဖြတ်နှင့် VFX နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. နှစ်ဦးစလုံးဟာအရှုပ်ထွေးဆုံးနှင့်အချိန်-စားသုံး Workflows ချောမွေ့စေရန်ကူညီဆွဲဆောင်မှုအသစ်သော features တွေပေးထားပါတယ်။ Baselight ရဲ့ HDR လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြီးတော့ကိုသစ်စာရှိရှိယနေ့မျှော်လင့်ထားပေးပို့ပုံစံများ၏အလုံးအရင်းကိုဖြတ်ပြီးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်သောတိုးချဲ့အကွာအဝေးနှင့်အရောင်အစအဆုံးအကုန်အတွင်းရူပ, ဖွံ့ဖြိုးဆဲရည်ရွယ်သည်။
The post ထုတ်လုပ်မှုတပ်ဆင် Jigsaw 24 သည်ဖန်တီးမှုစက်မှုလုပ်ငန်းမှလန်ဒန်ရဲ့ဦးဆောင်ပြန်လည်ရောင်းချသူများ၏တဦးတည်းအားဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။
Nebras ရုပ်ရှင်ဆော်ဒီအာရေဗျအတွင်းပထမဆုံး Full-service ကိုရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အမှန်ပင်ကမ္ဘာတစ်လွှား clients များအားပူဇော်နိုင်သည့် State-Of-The-Art ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်များ unrivaled သိရသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.nebrasfilms.com
4K ARRI Alexa Baselight Baselight TWO ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည် suite ကို Cian ပက်ထရစ် McLysaght filmlight HDR အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်း isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော Jigsaw 24 ဒေသခံအကြောင်းအရာ MKM Marcomms MKM Marketing ကိုဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Nebras ရုပ်ရှင် အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် post ကိုအိမ်သူအိမ်သား post ကိုထုတ်လုပ်မှု ဆော်ဒီအာရေဗျ က Ultra HD ဖိုရမ် Vision ၏ 2030 အစီအစဉ် 2019-07-31
ယခင်: DTC အသံလွှင့် IBC 10 မှာခန်းမ 2019 အတွက်၎င်း၏ Aeon Lite ကိုထွန်းလင်းရန်
နောက်တစ်ခု: mo-sys ကင်မရာကို Motion စနစ်များပိုမိုဆန်းသစ်သောရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းသည်အဆိုပါလမျးပှငျ့သှား